Tao anatin’ny roa andro, dia polisy dimy nahitana vehivavy telo no niakatra Fitsarana. Ny iray mpamilin’ny lehiben’ny Fip any an-toerana. Ny telo hafa kosa dia polisy vehivavy brigadier niampy manamboninahitra polisy vehivavy iray. Ity farany sy polisy lehilahy iray no naiditra am-ponja.
« 10 izany izao no fitambaran’ny polisy naiditra am-ponja hatreto tamin’ireo 18 natolotra ny Fitsarana, tamin’ity raharaha nahafaty mpitsara tany Toliara ity. Izay no zava-misy fa tsy manana zavatra hafa ambara aho », hoy ny contrôleur général Rakotondratsima Désiré Johnson, Tale jeneralin’ny polisim-pirenena.
Tsy mbola mivaha ny olana
Raha tsiahivina dia noho ny olana teo amin’ny didim-pitsarana manasazy polisy iray higadra dimy taona an-tranomaizina sazy mihatra noho ny fahatrarana basin’ilay polisy tany amin’ny jiolahy no niteraka ny olana. Tsy nanaiky io didim-pitsarana io ireo polisy namany ka niteraka ny korontana tany an-toerana izany ary nitarika tamain’ny fisamboran’ny polisy ny mpitsara Rehavana Michel.
Na eo aza ny fanolorana ireo polisy voarohirohy eo anoloan’ny Fitsarana dia tsy mbola mivaha ny olana. Manohy ny fitokonany faobe ny sendikan’ny mpitsara (Smm). Tsikaritra kosa anefa taorian’ny fivoriamben’ireo mpitsara teny Anosy ny alatsinainy teo fa tsy niresaka mikasika ny fialan’ny minisitry ny Filaminana anatiny intsony ny Smm.